Wednesday February 19, 2020 - 21:00:24 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Tafaasiil dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa dagaal culus oo maanta ka dhacay inta udhaxaysa deegaanada Lafoole iyo Xaawa Cabdi ee duleedka magaalada Muqdisho.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii ay ciidamada Al Shabaab wadada ugaleen kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen askar iyo saraakiil katirsan maleeshiyaadka dowladda Federaalka kuwaas oo gurmad u ahaa deegaanka Ceelsaliini oo saaka uu ka dhacay dagaal khasaara badan dhaliyay.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in dagaal saacado badan qaatay kadib ay xoogaga Al Shabaab ku guulaysteen in ay cagta mariyaan kolonyadii gurmadka aheyd, war rasmi ah oo kasoo baxay taliska ciidanka Al Shabaab ayaa lagu sheegay in dagaalkii Lafoole lagu dilay 31 askari islamarkaana lagu gubay 2 gaari Cabdi Bilayaal ah.
Wararka ayaa intaas ku daraya in saraakiisha sida xun ugu dhaawacmay dagaalkii Lafoole uu kamid yahay taliyihii guutada 6aad ee ciidamada dowladda kaas oo xilligii weerarku qabsanayay gurmad u ahaa ciidamadii saaka lagu weeraray Ceelsiliini.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in ay maqlayeen jugta qaraxyo is xixigay oo lagu beegsanayay gaadiidka ciidamada dowladda xilligii uu dagaalku socday, hubka culus ee laysku weydaarsanayay dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka Lafoole ayaa laga maqlayay xaafado katirsan degmooyinka Dharkeynleey,Hodon iyo Dayniile oo dhammaantood Muqdisho katirsan.
Isku geyn khasaaraha dhimasho ee ka dhashay weeraradii ciidamada dowladda maanta lagula beegsaday Shabeellaha Hoose waa 72 askari dhimasho ah 41 askari waxaa lagu dilay Ceel Saliini halka 31 askari lagu dilay weerar jidgal ah oo ka dhacay wadada laamiga ah ee xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye.
Ugu yaraan 6 gaari ayaa ciidamada dowlada looga gubay labada weerar halka 2 kale ay gacanta ku dhigeen dagaalyahannada Al Shabaab, gobolka Sh/hoose ayaa si aad ah looga hadal hayaa khasaaraha lixaadka leh ee ciidamada dowladda lagu gaarsiiyay weeraro is xigxigay oo maanta ka dhacay